-Esi nweta mgbọrọgwụ na New HTC One M8 na M7 Mfe | Gam akporosis
Otu esi enweta mgbọrọgwụ na HTC One M8 na M7
Francisco Ruiz | | Gam akporo Root, HTC, Nkuzi
N'ime nkuzi ndị a bara uru m ga-akuziri gị, ekele maka ọgbakọ mmepe nke Android Ndị na-emepụta XDA na ndị ọrụ kere ngwa a dị mfe maka gam akporo, ụzọ ziri ezi Nweta mgbọrọgwụ na HTC One M8 na HTC One M7.
WeakSauce bụ aha nke ngwa ọrụ anyị ga-eji ekele ndị kere ya Adịghị ama ama y Ntughari, ndị ọkachamara ochie nke nyocha gam akporo na nzukọ mmepe.
Na mbụ na-agwa gị na usoro a na- Nweta mgbọrọgwụ na HTC One M8 na HTC One M7 Egosiputala ya na uzo Verizon, ufodu udiri na mgbe ochie bu otu n’ime ihe di mgbagwoju anya iji nweta Root n’ihi nsogbu ha nwere na bootloaders ha mechiri emechi.
Tupu ịmalite nkuzi a, nke dị mfe, Achọrọ m ịgbatị ọkwa nke XDA ebe ndi mmepe nke ngwa gam akporo n’onwe ya na-ewe iwe. Ọ bụ ma m ma Gam akporosis Anyị ga-aza ajụjụ maka ihe nwere ike ime gị ọhụụ ọhụrụ HTC One, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị na-agbaso usoro niile akọwapụtara ebe a, ọ dịghị ihe ọ bụla ga-eme.
1 Otu esi enweta mgbọrọgwụ na HTC One M8 na HTC One M7
1.0.1 Nzọụkwụ soro Root HTC One M8 na HTC One M7
Otu esi enweta mgbọrọgwụ na HTC One M8 na HTC One M7
Oge a ka ụmụ okorobịa si XDA nweta Mgbọrọgwụ ndị a abụọ ụdị nke gam akporo ọnụ, na ọ bụ na naanị ibudata ma wụnye ngwa a anyị nwere na XDA forum anyị ga-enweta ihe zuru ezu. Anyị agaghịdị enwe kọmputa nkeonwe iji nweta ya! Nhọrọ a na-apụghị ichetụ n'echiche na ụdị HTC.
Nzọụkwụ soro Root HTC One M8 na HTC One M7
Site na ntọala ntọala Mgbọrọgwụ anyị na-eme ka ikikere nwee ike ịwụnye ma gbue ngwa site na isi mmalite.
Anyị na-ebudata ma wụnye ngwa ahụ WeakSauce site n'otu uzo a.
Anyị na-agba ọsọ na ngwa na HTC One anyị.
Anyị na-anabata okwu ndị ahụ wee pịa bọtịnụ ahụ Root.
Anyị na-eche ihe dịka otu nkeji maka mmemme ahụ iji rụọ ọrụ ya.
Anyị na-agbada Supersu kpọmkwem site Playlọ Ahịa Google.
Ma nke ahụ bụ ya, ị nweelarịrị ịnweta ikikere Mgbọrọgwụ na HTC One M8 na HTC One M7.
Imecha gwa ha nke ahụ WeakSauce anaghị eme ka Nkpọrọgwụ na-adịgide adịgide na ngwaọrụ emebere na nke a ga-egbu na mmalite ọ bụla nke ọnụ iji laghachi nweta mgbọrọgwụ na ngwaọrụ. Nke a pụtara na oge ọ bụla ọnụ ọgụgụ ahụ ga-amaliteghachi, ọ ga-ewe ihe dịka otu nkeji ka anyị nwetaghachi ikikere Mgbọrọgwụ.
Budata - WeakSauce.apk
[wpv-post-body view_template = »Ngwaahịa yitere» id = »$ smartphones»]
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Otu esi enweta mgbọrọgwụ na HTC One M8 na M7
Ngwa ahụ kwụsịrị mgbe m nwara ịwụnye ya na htc one m7 telcel
Ọ na-ekwu mgbọrọgwụ ọdịda
Uchenna 21 dijo
Ọ na-agwa m na ngwa ahụ akwụsịla ma ghara ikwe ka m gbaa ya, gịnị ka m ga-eme?
Ọ na-agwa m na ngwa ahụ akwụsịla, olee otu m ga esi eme ka ọ rụọ ọrụ?
Ngwa ahụ kwụsịrị nke a anaghị arụ ọrụ 🙁
The ngwa na-akwụsị ihe m ga-eme na HTC one m7
na ara bato dijo
Nke a anaghị arụ ọrụ maka m, ọ na-abịa si mgbada ọdịda
Zaghachi ara bato
Ọ naghị arụ ọrụ na M7 ngwa ahụ kwụsịrị
Ọ bụ Irving Gijon Gutierrez dijo
Ọ naghị arụ ọrụ, enwere m ọdịda mgbọrọgwụ
Zaghachi Irving Gijon Gutierrez
WeakSauce.apk = poop na ọ dịghị onye na-enye nkọwa, n'ihi na ha enweghị ike biputere ihe ọ bụla
johny mebaño dijo
Okwa wea adighi arum aru !!
Zaghachi johny mebaño
Ọ na-agwa m ngwa awụnyerebeghị? ọ naghị arụkwa ọrụ !!
Otu ihe ahụ na-eme m dị ka ndị ọzọ, ọ na-ekwu naanị na usoro ọnụọgụ abụọ blah blah blah.
ọcha mkpofu ha dị na-ebipụta nri? ha tuto anaghị arụ ọrụ ha dị ka ndị nzuzu amamihe na-ekele n'efu
Raul Antonio Burgos dijo
Anaghị arụ ọrụ na-akwụsị
Zaghachi Raul Antonio Burgos
Ọ D WORGH WOR ỌR WOR
Ọ naghị arụ ọrụ
Jorge lopez okechukwu dijo
Ọ rụ ọrụ dị ukwuu nye m, mana enwere m ike ịwụnye mgbake ??? Ma ọ bụ ọ bụghị?
Zaghachi Jorge lopez
Amazing Android ngwa: Taa Auto Pilot Mode
Otu esi egosi njikọ WiFi dị ka Hotspot na gam akporo iji zere ị excessiveụbiga mmanya ókè